Забур 75 CARS - Nnwom 75 ASCB
1Ao Onyankopɔn, yɛda wo ase,
yɛda wo ase, ɛfiri sɛ wo Din abɛn;
nnipa ka wʼanwanwadeɛ kyerɛ.
2Woka sɛ, “Me na mehyɛɛ ɛberɛ a ɛsɛ no;
ɛyɛ me na mebu atɛntenenee.
3Sɛ asase ne ɛso nnipa nyinaa woso a,
me na mema nʼafadum gyina hɔ pintinn.
4Meka kyerɛ ahantanfoɔ sɛ, ‘Monnhoahoa mo ho bio,’
na meka kyerɛ amumuyɛfoɔ nso sɛ, ‘Mommma mo mmɛn so.
5Mommma mo mmɛn so ntia ɔsoro;
mommfa animtiabuo nkasa.’ ”
6Obiara mmfiri apueeɛ anaa atɔeɛ
anaa ɛserɛ no so a ɔbɛtumi ama obi so.
7Ɛyɛ Onyankopɔn na ɔbu atɛn:
Ɔbrɛ ɔbaako ase, na ɔma ɔfoforɔ so.
8Kuruwa bi hyɛ Awurade nsam
nsã bi a ɛtwa ahuro a wɔde nnuhwam afra ahyɛ no ma;
ɔhwie, na asase so amumuyɛfoɔ nyinaa
nom ma ɛka aseɛ puo.
9Me deɛ, mɛpae mu aka yei daa daa;
mɛto ayɛyi dwom ama Yakob Onyankopɔn.
10Mɛbubu amumuyɛfoɔ nyinaa mmɛn,
nanso mɛma ateneneefoɔ ahoɔden foforɔ.
ASCB : Nnwom 75